သုံးစွဲမှုမူပိုင် & Conditions - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
စားသုံးသူပြန်ကြားရေး / သုံးစွဲမှုအခြေအနေများ
မဟုတ်ရင်မှတ်ချက်ချမဟုတ်လျှင်ဒီ web site ၏အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကို, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်ကမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်နေကြသည်။
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်ဤအကြောင်းအရာများကိုမရှိသောအဘို့ကိုပြသမည်အကြောင်း, အပ်လုဒ်တင်ပြီး, ချိ, ပြန်ထုတ်ပေး မှလွဲ. , အီလက်ထရောနစ်, မည်သည့်ပုံစံ၌ဖြစ်စေမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေ, posted စက်မှု, photocopying, မှတ်တမ်းတင်ခြင်း, သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မူပိုင်ခွင့်များကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကိုင်ဆောင်သူ။ ခွင့်ပြုချက်က HTML browser ကို software ကိုသုံးပြီးကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အတူ contents တွေကိုပြသရန်နှင့်, အသုံးပြုမှုကို download လုပ်ပါရန်, တစ်ခုတည်းကိုသာ Non-စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးအသုံးပြုမှုများအတွက်, ခွင့်ပြုသဖြင့်, ပစ္စည်းပုံနှိပ်မိတ္တူ, ပစ္စည်းမှမပြုပြင်မွမ်းမံကိုဖန်ဆင်းကြောင်းသည် လူအပေါင်းတို့သည်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်သတိပေးချက်များစောင့်မတော်မူသော။ ခွင့်ပြုချက်အခြား HTML စာရွက်စာတမ်းများအတွက် site ကိုပါဝင်သောစာရွက်စာတမ်းများ၏ Uniform Resource Locator (URL) မှလင့်များထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်အားလုံးအမှတ်တံဆိပ် ရရှိ. တွေဖြစ်တဲ့လင့်များအတွက်မှတ်ချက်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာခွင့်ပြုခွင့်ပြုချက်မဆိုအခြား web site မှာ contents တွေကို repost ခွင့်မပါဝင်ပါဘူး။ အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကုန်ကြမ်းများ၏ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုပြုပြင်မွမ်းမံမူပိုင်ခွင့်များနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းသတ်မှတ်ထားသောအဖြစ် contents တွေကိုတချို့၏အသုံးပြုမှုနောက်ထပ်န့်အသတ်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်ကဒီ web site ကိုတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များတိကျမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့သော်အမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်အမြန်သို့မဟုတ်မည်သည့်အထူးရည်ရွယ်ချက်ကုန်သည်သို့မဟုတ်ကြံ့ခိုင်ရေး limitation မရှိဘဲအပါအဝင်, ဒီ web site ကိုမှစပ်လျဉ်းသမျှမည်သည့်ကိစ္စမှအဖြစ်အဓိပ်ပာဖြစ်စေ, မည်သည့်မျိုးမဆိုအာမခံ disclaims ။
အမှတ်တံဆိပ်, မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဤက်ဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာအုပ်ချုပ်သည်အခြားဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုရည်မှတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်, ဖဲရ်ဖီးလ်အိုဝါ 52557, အမေရိကန်နိုင်ငံဖို့ညွှန်ကြားရပါမည်။
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်တစ်ခုတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity Institution မှဖြစ်ပါတယ်။
တစျခုလုံးရဲ့ contents စီမံခန့်ခွဲမှု၏မူပိုင် Maharishi တက္ကသိုလ်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
Transcendental တှေးတောဆငျခွ, TM, TM-Sidhi, ယောဂပျံ, Maharishi Ayurveda, ကို Creative ထောက်လှမ်းရေး၏သိပ္ပံ, Maharishi Sthapatya Veda, Maharishi ကို Global ဆောက်လုပ်ရေး, Maharishi ယောဂ, Maharishi Yagya, Maharishi ဝေဒဗေဒင်, Maharishi Jyotish, Maharishi Gandharva Veda မှ Maharishi ဝေဒချဉ်းကပ်® ကနျြးမာရေး, Maharishi ဝေဒတုန်ခါမှုနည်းပညာ, Maharishi rejuvenation, Maharishi Rasayana အစီအစဉ် Maharishi ဝေဒစီမံခန့်ခွဲမှု, Maharishi ကော်ပိုရိတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်, သိစိတ်ကို-အခြေပြု, Maharishi ဝေဒတက္ကသိုလ်, Maharishi ဝေဒကျောင်း, Maharishi ဝေဒစင်တာ, Maharishi Ayurveda ကျောင်း, Maharishi Ayurveda တက္ကသိုလ်, Maharishi Ayurveda ကောလိပ် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် Maharishi Ayurveda ဖောင်ဒေးရှင်း Maharishi Ayurveda Medical Center မှာ, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်, ဉာဏ်အလင်း၏အသက်အရွယ်၏ Maharishi ကျောင်း, Maharishi Medical Center မှာ Maharishi ဝေဒ Medical Center မှာ Maharishi ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်, Maharishi ဝေဒ, Maharishi, Maharishi ကိုယ်ပိုင် Pulse, Maharishi ကောင်းကင် က Man အတွက် Excellence ဘို့, Maharishi ရေးစင်တာ agement, Maharishi ဝေဒစီမံခန့်ခွဲမှု, Maharishi မာစတာစီမံခန့်ခွဲမှု, သဘာဝဥပဒေ, Maharishi ဝေဒဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့, တစ်ထောင်-Head ပူရုရှား, Maharishi တစ်ထောင်-Head ပူရုရှား, Maharishi ပူရုရှား, ပူရုရှား, Thousand- မှတဆင့်သဘာဝဥပဒေအခြေပြုစီမံခန့်ခွဲမှု, Maharishi ကော်ပိုရိတ် Revit အစီအစဉ် Maharishi ကို Global အုပ်ချုပ်ရေး ဦးခေါင်းမိခင်မြင့်မြတ်သောအမေဘုရားသခငျ့, စံပြမိန်းကလေးများကျောင်း, 24 နာရီ Bliss, အမေရိက၏ဝိညာဉျရေးတက္ကသိုလ်, ဣနြေ္ဒ, ဝေဒအသံကုထုံး, Maharishi Amrit Kalash, ဝေဒဆေးပညာ, ဝေဒသိပ္ပံ, Maharishi ဝေဒသိပ္ပံ, Maharishi ဝေဒနက္ခတ်, Vastu ၏ Maharishi ကောလိပ်၏ရူ Vidya, Maharishi Vastu, အချိန်ဇုန်မြို့တော်, အဓိပတိထောက်လှမ်းရေး၏ကောင်စီနှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကာကွယ်တားဆီးရေး Wing မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ဘုံဥပဒအမှတ်တံဆိပ် Maharishi ဝေဒပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှလိုင်စင်နှင့် sublicense အောက်မှာသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုကြသည်နေကြသည်။
ဥပဒေရေးရာ Menu ကို
သုံးစွဲမှုမူပိုင် & အခြေအနေများ